बेलको फाईदा थाहा छ तपाईलाई ? बेलले कुन कुन रोगको उपचार गर्नु सकिन्छ ? जानी राखौँ – दैनिक नेपाल न्युज
बालबेल भनेको काँचो चाना पारेर सुकाएर राखेको बेल हो, जसलाई कुटेर बिहान/बेलुका एक/एक चम्चा काँडा पकाएर खाने गरे पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरु ठीक हुन्छ ।
जतिसुकै कडा र पुरानो आउँ रगत परेको छ भने पनि बालबेलको काँढा बिहान/बेलुका सेवन गरेमा तीन/चार दिनमै ठीक भएर आउँछ ।
बेलको एक मुठी पात पानीमा पिनेर मिस्री हालेर खाएमा जस्तो सुकै दिसा/झाडा लागेको पनि तीन/चार मात्रामै ठीक हुन्छ ।
बेलपत्रको रस नित्य एक/एक चम्चा बिहान/बेलुका पिउने गरेमा अजीर्ण, पुरानो आउँ रगत आदि रोग ठीक हुन्छ ।
गिजा दुख्ने, पाक्ने भएमा बेलपत्रको धूलोमा तोरीको तेल तीन/चार थोपा, नुन एक चिम्टी र एक चिम्टी बेसार हालेर औंलाले बिस्तारै गिजामा मालिस गर्ने र तातो पानीले केही दिन कुल्ला गर्ने गरेमा दशरपन्ध्र दिनमै ठीक हुन्छ ।